Global Voices teny Malagasy » Karaiba: Ho Fanohanana Ny Renintsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Mey 2012 6:39 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Karaiba, Goiana, Haiti, Jamaika, Kiobà, Trinite sy Tobago, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Anton-dresaka mafana nataon'ireo mpitoraka bilaogy rezionaly ny Fetin'ny Reny , izay nankalazaina tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo manerana an'i Karaiba, – na koa hoe, ireo reny. Avy amin'ny lahatsoratra fankasitrahana  ary koa avy amin'ny kaonty amin'ny fomba hanoheran'ireo vehivavy ny fanenjehana, mifangaro voraka ihany izy ity, fa tokony ho faly daholo ireo reny rehetra na aiza na aiza …
Hanamarihana ny fotoana ary dia nalahatr'i TALLAWAH  ireo reny Jamaikana malaza ahazoany valinteny amin'izao andro fametrahana itony fanontaniana malaza itony: ny fananan-janaka ve no tena zavatra tsara indrindra nataonao teo amin'ny fiainanao?” Saika azo vakiana ihany  ny valinteny.
Nandray ny reniny ho “ohatra velona izay nanao sorona ny tenany” ny mpiray tanindrazana Nadine, Unscripted  :
Nisy ny fotoana nisian'ny fifandraisana tsara sy ratsy teo aminay, ary nifampikatro-doha aza tamin'ny fotoana sasany. Nefa, ao an-tsaiko ao, na dia teo aza ireo rehetra niarahanay nodiavina, dia tsaroako foana ny zavatra rehetra nomeny anay, satria miahy anay izy.
Naka fotoana ihany koa izy nisaotra “ireo reny rehetra, rafozam-bavy, renibe , ireo ray izay manana adidy roa ho toy ny reny, ary ireo reny izay nanan-janaka avy amin'ny fo fa tsy avy amin'ny kibo”:
Na aiza na aiza misy anao amin'ity bolantany ity, dia misaotra anao ny tenako ary ireo fanomezana nataonao. Fantaro fa tahiana ianao, omena voninahitra, ary tiana..
Naneho ny fihetsehampony  i Guyanese-born Tastes Like Home :
Misaotra anao nitia ahy.
Misaotra anao nikarakara ahy.
Misaotra anao nihaino ny toreoko.
Misaotra anao nanohana ahy.
Misaotra anao nankahery ahy.
Tena adidy lehibe mihitsy ny miteraka, ary tena miaiky ny fomba ahaizanao mampifandanja ny fiainanao, ny asanao sy zavatra rehetra ao anatin'izany. Miaraka amin'ireo maro ihany koa aho mitehaka sy miarahaba anao amin'ity andro tena miavaka ho anao ity.
Ao amin'ny My big, fat, Cuban family , niditra an-tsehatra ihany koa ny mpitoraka bilaogin'ny ankizy ary nizara ireo zavatra manan-danja nampianarin'ny reniny azy nandritra ny taona maro – hatramin'ny “[niainana] tantara tsara ” ka hatramin'ny “tsy fananana tahotra.” Ny mpitoraka bilaogy Kiobana no tena nandrenesana feo  mikasika ny fahafoizan-tenan'ny  reny – sy ny vehivavy rehetra – izay mbola handalo amin'izany. Naneho lahatsoratra mikasika ny “fitondran'ny reny Kiobana” i Havana Times  “…
Rehefa misy zazakely mangata-maso anao sy milaza hoe: ‘Neny, noana aho’ nefa mahafantatra tsara koa ianao fa ny karaman'olona roa aza tsy ampy ho amin'izany fangatahana fototra izany…dia hitanao hoe avy aiza ny herin'ny reny.
…fa fomba fijery mifandanja amin'izany ao amina lahatsoratra hafa  no manazava ny antony mahatonga ny maha-reny hankasitrahana:
Maro amin'ireny no oroka, oroka sy teny hoe ‘Neny, tiako ianao’. Isan'ny zavatra izay mampatsiahy ahy fa tsy sorona ny maha-reny. Fitahiana tsotra izao ny maha-reny.
Fa maninona ary ny Kiobana no tsy manan-janaka maro? Nanolotra fomba fijery iray ity lahatsoratra ity . Nandefa lahatsarina foko iray  i Pedazos de la Isla ho an'ny vehivavy Kiobana, manazava hoe:
Tamin'ny Fetin'ny Reny 2012, maro tamin'ireo reny Kiobana – izay ny ankamaroany mpikambana ao amin'ny Vehivavy miakanjo Fotsy (Ladies in White) no nogadraina ary novonoin'ny polisy politika Kiobana, ary nefa mbola manohy fihetsiketsehana ataony ihany izy iro ary MANOHITRA ny fanenjehana.
Miatrika ny fanenjehana, ny fandroahana, ny daroka, ary gadraina izy ireo noho izy ireo mangataka ny zony amin'ny firenena iray manontolo. Na dia eo aza izany, dia mbola mahita fotoana ihany izy ireo hiarovana sy hampianarana ny zanany sy ny fianakaviany. Tena ohatry ny risi-po sy aingam-panahy mihitsy izy ireo.
Nanao lahatsoratra ny Notes from the Cuban Exile Quarter  tamin'ny volana Martsa ho voninahitry ny fahatsiarovana an'i Laura Pollan :
Na dia teo aza ny fandrahonana, ny fanenjehana, ary na dia maro aza ireo vehivavy no nogadrain'ny mpitandro ny filaminana, Vehivavy 68 miakanjo Fotsy no nanaraka ny diabe namakivaky ny Fifth Avenue  any andrefan'i Havana. Sady nandeha izy ireo no nihira  ‘Viva Laura Pollán!’ ary koa ‘Fahafahana ho an'ny gadra politika !’
Nanao famaritana tranga maromaro ahitana vehivavy nigadra sy nampitahorina ny mpitoraka bilaogy iray (miaraka amin'ny hafa ), manao hoe:
Tsara ihany ny koa ny mampatsiahy fa any am-ponja no andanian'ny Reny Kiobana  ny androny noho ny fiarovany ny zon'olombelona ho an'ny vahoaka Kiobana.
Etsy andanin'izany, manome ny heviny i Haiti Chery , amin'ny renin'i Trayvon Martin  milaza hoe:
Namoaka fanambarana i Sybrina Fulton, renin'i Trayvon Matin tamin'ity faran'ny herinandro ity, manararaotra ny Fetin'ny Reny…, mangataka ny mpamaky; ‘ny hiantso ny governoran'ny tanàna misy anareo’ ary ny handrisika azy ireo ny mba hijereny indray ny ‘ lalàna arovy ny kianjanao’ izay nitarika ny namonoana ny zanany lahy.
Nanamarika ny vanim-potoana ihany koa ny mpitoraka bilaogy ampielezana Trinidadiana, na dia hafa aza ny fomba nanehoany izany. Nanome soso-kevitra vitsivitsy  mikasika ny fanomezana amin'ny Fetin'ny Reny ny mpitoraka bilaogy mpanao lamaody Afrobella (dindona: mialà lavitra ny vy!) ary mirary andro mahafinaritra an“ireo izay rehetra azo atao hoe reny”  :
Na ianao reny noho ianao niteraka, na ianao nanagan-janaka, na ianao rahavavy na nenitoa na nenibe mahafinaritra izay manana anjara andraikitra-na reny eo amin'ny fiainan'ireo ankizy madinika, dia mirary soa anao amin'ny Fetin'ny Reny ny tenako. Misaotra amin'ny zavatra rehetra nataonao nanefenao ny fiainan'ny zaza madinika! MIKAONTY daholo ireny rehetra ireny. Misaotra anao noho ianao isan'ny olona eto amin'ny tanàna. Tena tiana noho ny efa fantatrao ianao.
Nilaza ny mpitoraka bilaogy an-tsary iray chookooloonks  etsy andanin'izany hoe:
Tahaka ny hafahafa izany foana rehefa mandray fanomezana amin'ny Fetin'ny Reny…Tsy dia ‘reny’ loatra aho ka hoe handray fanomezana indray maka isan-taona noho ny ezaka vitako. Reny aho noho ny antony hoan'ny tenako manokana: satria dia te-ho reny aho. Satria tena manana olana maro amin'ny manodidina ahy aho noho ny zanako. Satria izany no nanaovana ahy.
Fa fantatrao ve inona no tena tsara?​
Raha izahay reny no mahay mampiasa ny Fetin'ny Reny ho andro nataonay hifanampian'ny samy reny fotsiny. Tena hafahafa amiko mihitsy hoe traikefa iraisam-pirenena izao — manangan-jaza– dia ahatsapana indraindray fa irery ny tena. Ary raha tsorina, omena tsiny: dia mahazo hafatra izahay isan'andro, avy amin'ny haino aman-jery, ny foibe ara-kolontsaina, avy amin'ny fiarahamonina, eny avy amin'ny reny sasany aza milaza fa tsy mety ny ataonao. Misy ireo fitsarana amin'ny hoe ahoana ny fomba maha-reny — ‘voajanahary’ ve sa sezarienina sa manangan-jaza sa nampitondrana vohoka. Na koa hoe tokony hiasa any ivelan'ny trano ve ianao. Sa tsia. Na tokony hampinono. Sa tsia. Na tokony adiny firy ianao no mampinono. Ahoana ny tokony sakafo omenao ny zanakao. Na ahoana ny tokony hampiakanjonao azy. Na hoe fikambanana inona no tokony ampidiranao azy. Na hoe oviana ny zanakao no tokony miditra mianatra. Na aiza. Na trano fitaizana aiza. Na … na … na ….
Ka amin'ity taona ity ary, ity misy hevitra: ankoatra ny efa mahareny antsika eo amin'ny fianakaviantsika, dia andeha haka fotoana ivelan'ny andavanandrontsika isika mba handefa hafatra an'ireo rahavavintsika — reny izay tsy renintsika mihitsy na koa tsy namantsika mihitsy — ary hiteny amin'izy ireo fotsiny hoe, ‘nahavita soa ianao.’ Mandefasa mailaka any amin'olona (na dia olona fantatrao amin'ny aterineto fotsiny aza), na dia hilaza amin'ny fotsiny aza hoe, ‘Mahafinaritra ny zanakao’, na ‘ray aman-dreny tena azo alain-tahaka ianao,’ na ‘sambatra ny zanakao manana anao.’ Hafatra tsy ampoizina mandrisika ireo reny hanohy ny efa fanaony andavanandro​.
Ny hajian-tsary ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity “Reny, rahavavy” ,dia Sakafo ho an'Izao tontolo izao, nampiasaina miaraka amin'ny alalana Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Creative Commons license . Tsidiho Sary flickr ahitana ny sakafo hoan'izao tontolo izao .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/29/33307/
 Fetin'ny Reny: http://en.wikipedia.org/wiki/Mother
 lahatsoratra fankasitrahana : http://pastelpinkpaisley.blogspot.com/2012/05/mothers-day.html
 Naneho ny fihetsehampony : http://www.tasteslikehome.org/2012/05/thank-you-for-everything.html
 nandrenesana feo : http://translatingcuba.com/?p=18316
 ny fahafoizan-tenan'ny: http://www.havanatimes.org/?p=70006
 ity lahatsoratra ity : http://translatingcuba.com/?p=18326
 lahatsarina foko iray : http://pedazosdelaislaen.wordpress.com/2012/05/13/a-tribute-to-the-cuban-woman-on-mothers-day/
 fahatsiarovana an'i Laura Pollan: https://globalvoicesonline.org/2011/10/18/cuba-remembering-laura-pollan/
 Vehivavy 68 miakanjo Fotsy no nanaraka ny diabe namakivaky ny Fifth Avenue: http://america.infobae.com/notas/50342-Las-Damas-de-Blanco-recordaron-a-Laura-Pollan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 Sady nandeha izy ireo no nihira : http://www.prensalibre.com/internacional/Cuba-disidencia-politica_0_699530179.html
 miaraka amin'ny hafa : http://www.capitolhillcubans.com/2012/05/on-this-mothers-day.html
 Reny Kiobana: http://cubadissident.impela.net/2012/04/state-security-initiates-criminal-procedures-against-sonia-garro-laritza-diversent/
 Trayvon Martin: https://globalvoicesonline.org/2012/03/24/united-states-i-am-trayvon-martin/
 soso-kevitra vitsivitsy : http://www.afrobella.com/2012/05/11/the-best-mothers-day-presents/
 “ireo izay rehetra azo atao hoe reny”: http://www.afrobella.com/2012/05/13/happy-mothers-day-to-anyone-whos-motherly/
 “Reny, rahavavy”: http://www.flickr.com/photos/breadfortheworld/4995508303/
 amin'ny alalana Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Creative Commons license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en
 Sary flickr ahitana ny sakafo hoan'izao tontolo izao: http://www.flickr.com/photos/breadfortheworld/